Ama-Bulls azodlala nama-Lions kwi-derby ye-Jukskei | Scrolla Izindaba
Ama-Bulls azodlala nama-Lions kwi-derby ye-Jukskei
I-Jukskei derby – phakathi kwamaqembu amabili ase-Gauteng ama-Bulls nama-Lions – iqala ngoLwesithathu enkundleni yezemidlalo i-Loftus ePitoli ngo-16h00.
Kanti umdlalo we-Currie Cup obuye wahlehliswa kusukela ngoZibandlela mhla zingama-26 ngenxa ye-Covid-19. Ama-Lions azimisele azoqhubeka nezindlela zawo zokunqoba ezenze babonakala beshaya ama-Sharks ne-Pumas emidlalweni yabo yokugcina.
Ngakolunye uhlangothi, ama-Bulls azoba nokugqwala, njengoba egcine ukudlala phakathi noZibandlela ngemuva kokuhlehliswa emidlalweni yabo emibili ngenxa yezivumelwano ze-Covid-19.
Ukunqoba kwama-Bulls kuzowabeka ethubeni elihle lokuvala indawo ephezulu nokuvikela i-semi-final yasekhaya futhi mhlawumbe neyamanqamu ekhaya. Leli qembu lasePitoli lisenomdlalo wokugcina ne-Pumas ngempelasonto ukusonga ama-pool stage.
Wumdlalo okufanele bawunqobe eqenjini lika-Ivan Van Rooyen’s Lions. Bazobe benethemba lokuthi ama-Sharks azowenzela umusa ngokushaya i-Western Province.
Ngenxa yokuhlolwa kwe-Covid-19, ama-Bulls aqoke isikwati eseluliwe ngenkathi esalinde imiphumela yokuhlolwa.
Isimemezelo sesikwati sibhekwe ngabomvu ukubuya kukaLizo Gqoboka ekulimaleni.
Umqondisi wama-Bulls ebholweni lombhoxo uJake White uzothemba imiphumela emihle ye-Covid-19 ikakhulukazi kubadlali abamqoka ngaphambi kwale-Jukskei derby. Kodwa-ke iqembu libuye linyuswe ukubuya kuka-Elrigh Louw (ohlangothini) .
Umqeqeshi wama-Lions u-Ivan van Rooyen uthe: “Imidlalo iza ngamandla futhi iyashesha, sidlale imidlalo emibili ezinsukwini ezinhlanu. Ngakho-ke kufanele sivuselele iqembu”
UVan Rooyen wenze izinguquko ezintathu eqenjini ebelidlala ne-Pumas. UProp Jannie du Plessis ungene esikhaleni sikaWiehahn Herbst kanti uMarnus Schoeman uzothatha indawo kaJaco Kriel onamava. U-Ondendaal ubuyela enkundleni yezemidlalo iLoftus Versfeld okokuqala ngqa selokhu akhululwa ama-Bulls.
Izithombe: yi-Xerox Lions